Zụta Plus Size Belted Skirted Leather Long Trenchi Coat For Women - Free Shipping & Enweghị |tụ | WoopShop®
Plus Size Belted Skirted Leather Long Trenchi Coat For Women
$ 73.99 Ịgachi price $ 92.99
Agba Brown Black
Agbakwunye agbakwunyere akpụkpọ anụ skirted akpụkpọ anụ maka ụmụ nwanyị - Brown / 5XL na-azaghachi azụ ma na-ebu ụgbọ mmiri ozugbo ọ laghachiri na ngwaahịa.
Losuredị mmechi: Belt
Dechọ Mma: Ego, Edozi warara
Dị elu ahụ: Akpụkpọ anụ & Suede
Ihe: Faux Akpụkpọ anụ
Nọmba nlereanya: N20C01056
Uwe Ogologo: ogologo
size na na ubu aka uwe ogologo
Mara: Biko gbasoro usoro eserese; iji họrọ nha. Ahọpụtala ozugbo dị ka omume gị si dị. Nha nwere ike inwe 2 ~ 3cm iche iche n'ihi ntuziaka aka. Biko rịba ama mgbe ị tụrụ.
Dabere na 54 nyocha
Mara ezigbo mma ma dịkwa arọ. Naanị m nyere iwu ka ibu karịa mana ọ dị mma. Kootu ahụ dị mma. Aga m akwado ịzụrụ site na ụlọ ahịa ahụ. O di nwute na m n’akuku okwu a were ihe kariri izu 5 na Israel, ikekwe n’ihi Corona mana enwerem oge mbu na ndu m rue mgbe m natara ya.
Ezigbo mmiri ozuzo maka ọnụahịa a. Ewegara m 5XL ka ọ bụrụ 54. Ma dị warara, kama maka nha 50-52. Mana ị nwere ike ịgbanwe bọtịnụ ahụ.
mma dị mma
Uwe mmiri ozuzo na-atọ ụtọ
Uwe mkpuchi ahụ bụ naanị bọmbụ! Obi dị m ụtọ ịbụ onye nzuzu! Ọ dị ka na foto ahụ, ogo akpụkpọ ahụ dị egwu, dị nwayọ, impregnation na-egbu maramara, enweghị isi mba ọzọ, ịkpụ na ịke dịkwa oke mma ma dịkwa mma, dabara nke ọma, na 48-50r nyere iwu 2XL, nnyefe ahụ emeghị were ogologo oge chere, bịara otu ọnwa. Obi dị m ezigbo ụtọ, m nwere ike ikwu.